गोविन्द्र मल्लले भने मेरो उम्मेद्धवारी पाटि सभापतिमा ! - बडिमालिका खबर
गोविन्द्र मल्लले भने मेरो उम्मेद्धवारी पाटि सभापतिमा !
बाजुरा–नेपाली काँग्रेस बाजुराका उपसभापति गोविन्द्र मल्लले नजिकै आउन लागेको काँग्रेसको अधिबेशनमा पाटि सभापतिमा उम्मेद्धवारी दिने वताएका छन् । नेता तथा कार्यक्रता सँग आफुले छलफल र सल्लाह गरिरहेको वताएका छन् । तथापि सहमतिमा नेतृत्व छनोटका लागि भने आफु पछि नहटने वताएका छन् ।
मल्लले भने सहमतिमा नेतृत्व चयन हुने संभावना कम रहेको वताएका छन् । निर्वाचन हुने अवस्था आए आफ्नो पनि सभापतिमा उम्मेदवारी रहने बताएका छन् । हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत रहेका मल्लले पार्टी र सत्ता दुई मध्ये एक पदमा उम्मेदवारी रहने बताएका छन् । मल्लले भने पार्टी सभापति भएको खण्डमा गाउँपालिका अध्यक्षमा दाबी नरहने र सभापति नहुने अवस्था आए थप एक कार्यकालका लागि गाउँपालिका अध्यक्षमा लड्ने मल्लको भनाई छ ।
गाउँपालिका अध्यक्षमा लड्ने कि पाटि सभापति भन्ने बारे सबै भन्दा पहिला पालिकामा नेता तथा कार्यक्रता सँग छलफल गरेर अघि बढने बताएका छन् । मल्ललाई नेपाली काँग्रेस भित्र भद्र र सालिन नेताका रुपमा चिनिने गर्छन् । पाटिमा सहमति सहकार्य भएर नेतृत्व छनोटमा गए आफु पाटि संगठन अनुुसार अगाडि बढने वताएका छन् । उनले थपे एक ब्यक्ति एक पद हुनुपर्ने बताए ।